Ahịhịa mara mma nke ejiri painiapia mee na -atọ ụtọ na nka dị mfe | Arụrụ aka na -aga
Ejula ndị tụrụ àgwà nwere painiapulu
Alicia tomero | | Crafts, Crafts maka ụmụaka
N'ime nka a, anyị ga -akuziri gị ka esi eme ụfọdụ na -akpa ọchị eju na -eji ụfọdụ obere painiapulu. Ọ bụ ụzọ izizi ịmegharị anụmanụ ndị a na -atọ ọchị site n'inye ha mmetụ nke agba nwere agba acrylic ma jiri otu kaadiboodu dọtara ha.
1 Ihe m jiri maka ejula anọ:
Ihe m jiri maka ejula anọ:
4 obere painiapulu
Oroma, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo acrylic paint
A ahịhịa maka eserese
Ndị na -ehicha ọkpọ oroma, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo
Tipex ma ọ bụ ihe nrịbama ọcha
A mpempe akwụkwọ
Anyị na -eji painiapulu agba ya agba acrylic. Anyị ga -agba onye ọ bụla ụcha dị iche iche, anyị na -ekwusi ike na agba agba ebe ọ bụla painiapulu ahụ nke ọma. Anyị na-ahapụ ka ọkọchị painiapulu.
Anyị na -ewere mpempe akwụkwọ wee debe painiapulu n'elu. Anyị na -aga ise ihe ma ọ bụ obere ma jiri aka ya mee ihe ọ ga -abụ ahụ ejula. Anyị ga -ese isi na ahụ. Anyị na -ebipụ ọnụ ọgụgụ anyị sere.
Anyị na -ewepụta ọnụọgụ ahụ ebipụ n'akwụkwọ ma anyị ga -akwado ya na kaadiboodu ka anyị nwee ike jiri ya dị ka ndebiri. Site na pensụl anyị na -esepụta ndepụta nke akwụkwọ ahụ ma anyị amalitela ise ya. Anyị ga -eme ahụ nke ejula 4. Anyị na -ebipụ ọnụ ọgụgụ ahụ.
Anyị na -ese ihe na -acha ọcha ma ọ bụ tipex the ntụpọ nke nha dị iche iche na akụkụ ala nke ejula. Anyị ga -ejikwa pensụl sepụta ọnụ na ụfọdụ anya mechiri emechi. Gbalịa lee foto ka esi eme ha ka ha debe ya ọchị ọchị.
Anyị na -eji pensụl akara ihe anyị mere akara ojii. Ụfọdụ oghere nke ọchị anyị na -agba ha White na-acha uhie uhie. Anyị na -etinye anya plastik n'ebe ndị achọrọ ha.
Anyị ga -ebipụ akụkụ ahụ ma ọ bụ ọdụ nke eju na -eme ahịrị siri ike. Anyị ga -ehulata ya ọ ga -abụkwa ntọala nke na -ejere anyị ozi dị ka nkwado nke painiapulu. Anyị na -agbakwunye nnukwu silicone na -ekpo ọkụ ka ahụ wee nwee ike jikọta ya na painiapulu.
Anyị na -ebipụ ụfọdụ iberibe ọkpọkọ paịper nke ahụ ga -abụ mpi ejula. N'otu njedebe ha anyị ga -atụgharị ya ime udi nke mpi mpi. Anyị na -etinye mpi site na ịrapara ha na silicone dị ọkụ n'azụ isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Ejula ndị tụrụ àgwà nwere painiapulu
Arụ aka ise iji akwa akwa akwa
Ọrụ aka bara uru maka ụlọ, zuru oke iji wepụta oge n'oge ọkụ